यौन सम्पर्क कसरी गर्ने ? यस्तो छ सन्नी लियोनीको टिप्स - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७२ कार्तिक २० गते ०:१३ मा प्रकाशित
मुम्बई । पूर्व पोर्नस्टार तथा बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनीले यौन सम्बन्धबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेकी छिन् । हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार, पोर्नस्टार भएको नाताले सन्नीलाई सोधिएको थियो कि शारीरिक सम्बन्धका बारेमा के सोच्छिन् के उनी सेक्सलाई सही मान्छिन् ? यी प्रश्नको जवाफ दिँदै सन्नीले भनेकी छिन्– यदी कुनै युवतीलाई बच्चा चाहिएको छैन् भने उनलाई औषधिको प्रयोग गर्न सुझाव दिइन् । केहीले यो कुरालाई गलत भन्ने गरेको सन्नीको गुनासो थियो । तर, उनले यदि कुनै दम्पत्ती बच्चाको तयार छैन् भने यो उपाय अपनाउनु उत्तम हुने बताईन् । उनी सुरक्षित शारीरिक सम्बन्धलाई समर्थन गर्छिन् । उनले भनिन्– शारीरिक सम्बन्धको समयमा केही महत्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जसले भविष्यमा कुनै किसिमको समस्या नआओस् । उनले बच्चादेखि बुढोसम्मले पनि सेक्स गर्न सक्ने भन्दै तर, त्यो सुरक्षित हुनुपर्ने धारणा राखिन् । विहेपछि मात्रै सेक्स गर्ने परम्पराको विरोध गर्दै उनले भनिन्–जसले जतिबेला चाँह्यो आफ्नो इच्छा पुरा गर्न सक्छ । तर त्यो सुरक्षित हुनुपर्छ ।सन्नीले आफ्नो विगत नकोट्याउन आग्रह गरिन् । उनले भनिन्– मेरो विगत कोट्याउँदा म भन्दा मेरो पति डेनियललाई बढी दुःख लाग्छ ।